‘घामड शेरे’को दोस्रो ट्रेलर रिलिज: हेरौँ, के छ नयाँ ? « रंग खबर
‘घामड शेरे’को दोस्रो ट्रेलर रिलिज: हेरौँ, के छ नयाँ ?
रंगखबर, काठमाडौँ – दुई साता पछाडी रिलिज धकेलिए पछि ‘घामड शेरे’को नयाँ ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्का स्टारर फिल्मको ट्रेलरमा केहि नयाँ दृश्य समावेश गरिएको छ । भने, आधा जति पुराना दृश्य नै छन् ।
निर्देशक बिसीकै कथा र निर्माण रहेको फिल्मलाई कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सल्यान जिल्लामा छायाँकन गरिएको छ । यसअघि कार्तिक ८ मा रिलिज हुने भनिएको फिल्म, अब कार्तिक २२ मा रिलिज हुँदैछ ।
बिसी मोसन पिक्चर्सको व्यानरमा निर्मित फिल्ममा कालीप्रसाद बाँस्कोटाको संगीत, नरेन्द्र मैनालीको डिओपी र सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन छ । नरेन्द्रविक्रम बुढा क्षेत्री कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा निर्देशक बिसी र सिमोश सुनुवारको लगानी छ ।